Puntland: Askari Gaari Ciidan la baxsaday oo dil lagu xukumay
Xeer ilaaliyaha guud ee Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Puntland Gaashaanle Sare Maxamuud Faarax
GAROOWE, Puntland - Maxkamadda dembiyada culus ee Ciidanka Puntland ayaa maanta oo Talaado ah xukun dil ah ku riday hal Askari, kaasi oo lagu eedeeyay inuu la baxsaday 21-kii bishii lasoo dhaafay Gaari Ciidanku leeyahay.
Askariga oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Guure ayaa lagu xukumay dil toogasho ah, isagoo maxkamadda ka maqan, waxaana xukunkiisa loo cuskaday qodobada 221, 222, 223 ee xeerka ciqaabta Ciidamada,
Xilliga ay Maxkamadda xukunka ridaysay waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ay kamid yihiin xeer ilaaliyaha guud ee Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Puntland Gaashaanle Sare Maxamuud Faarax iyo gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada Sareeye-Guuto Saciid Abyan Cigaal.
Askari la sheegay inuu Garaiga Tiknikada ah la goostay, ayaa waxaa xukunkan lagu fulin doonaan marka gacanta lagu soo dhigo, waxayna Maxkamaddu amartay Ciidamada Puntland inay si deg deg ah kusoo qabtaan.
Qoraalka Maxkamadda oo laga soo saarey Madaxtooyadda Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in qofkii soo qabtaa Askariga ay siin doonaan abaal-marin aan la shaacin waxay tahay.
Askariga la xukumay oo ku jiray aaga difaaca Tukaraq, ayaa Gaariga iyo hubkii saarnaa ula baxsaday dhanka Somaliland, iyadoo wararka Warsidaha Garowe Online uu helayo ay sheegayaan in loo gudbiyay magaalada Hargeysa, oo maamulka halkaasi ka jira uu dalacsiiyay.
Isagoo ka hadlyay Shirkii Brussels, ayaa Madaxweyne Gaas daboolka ka qaadey in qodobada...
Gaas oo eryay Taliye-yaal ciidan xili amniga Garowe laga deyrinayo
Puntland 24.09.2018. 16:41
Wasiirka Amniga Puntland oo ka hadlay xaaladda Boosaso [Dhagayso]
Puntland 12.02.2018. 17:37